Fiteny persana: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Fiteny persana: Fahasamihafan'ny versiona
Fiteny persana (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Desambra 2020 à 08:16
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Septambra 2020 à 12:34 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Desambra 2020 à 08:16 (hanova) (esory)
[[Sary:Iranian-languages-map.jpg|vignette|259x259px355x355px|Sarintany maneho ny faritra ahitaa ny mpiteny persana sy fiteny iraniana hafa. Io miloko maitso io ny manandrify ny fiteny persana ]]
Ny '''fiteny persana''' na f'''iteny farsy''' dia [[tenim-pirenena]]n' i [[Iràna|Irana]], ao amin' ny fianakaviana [[Fiteny indô-eorôpeana|indô-eorôpeana]], ao amin' ny sampana [[Fiteny indô-iraniana|indô-iraniana]], ao amin' ny zana-tsampana [[Fiteny iraniana|iraniana]]. Mahery ny 60 tapitrisa ny isan' ny mpiteny persana any Iràna ary ny any [[Afganistana]] misy 16 tapitrisa. Misy mpiteny persana koa ny any [[Tajikistana|Tajikistàna]], ny any [[Bareina]] ary ny any [[Ozbekistana|Ozbekistàna]] (foko tajiky). Atao hoe فارسی / ''fārsī'' ny anaran' ny fiteny persana any Iràna sy any Afganistàna. Endrika arabon' ny teny hoe ''parsi'', ny hoe ''farsi'' satria tsy manana renifeo ''p'' ny [[abidy arabo]].
Manana satam-piteny ôfisialy ny fiteny persana anatin' ireo [[firenena]] telo ireo: endriky ny fiteny persàna isam-paritra ny [[fiteny dary]] (fiteny ôfisialy ao Afganistàna) sy ny [[fiteny tajiky]] (fiteny ôfisialin' i Tajikistàna) izay tenenina koa ao [[Kirgizistana|Kirgizistàna]], ao [[Torkmenistàna]], ao [[Ozbekistàna]] ary koa ao [[Kazakstàna]]. Ny totalin' ny mpiteny persana dia misy 75 tapitrisa.
Ny totalin'ny mpiteny persana dia misy 75 tapitrisa. Ny fiteny persana dia fiteny eo amin'ny vondrom-piteny indô-eorôpeana ao amin'ny sampana indô-arianina. Ny rafi-pehezanteniny dia [[SOV]]. Soratana amin' ny alalan' ny [[abidy arabo]] ny fiteny persana na dia tsy manam-pifandraisana amin' ny [[fiteny arabo]] aza izy na amin' ny lafiny voambolana na amin' ny lafiny ara-drafi-peo. Any Tajikistàna (sy any Ozbekistàna miteny persana) dia soratana amin' ny [[abidy sirilika]] ny [[fiteny tajiky]].
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/999166"